တချိန်က မြန်မာတွေနဲ့ ယခုခေတ်မြန်မာတွေ ကွာခြားပုံကို ယခု Video မှာလေ့လာနိုင်ပါတယ်။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်က ဆရာတစ်ဦးရဲ့ အင်္ဂလိပ်လိုစာသင်ပုံတွေ၊ တချိန်က ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်လူကြီးတွေ ဘာသာတရားကို ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှု လေးနက်ပုံတွေကို လေ့လာအတုယူနိုင်ပါတယ်။ ဒီ Video ကိုကြည့်ပြီး ယခုခေတ်မြင်တွေနေတာတွေနှင့် နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လိုက်တော့ .......။ ကျွန်တော်တို့တွေ အများကြီးကို ....။
Buddhism in Burma song/video
Labels: Buddhism in Burma song/video
Sharing: ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဧရာဝတီအတွက် ပန်ကြားချ...
Karen Cultural event in London
Worldwide Reading: Burma’s silenced poets
Event: Zoya Phan in Conversation
Demonstration outside Burmese Embassy & An Evening...
Sharing: Online Photo Editing Tools
Top3easy ways to free up disk space in Windows 7...
AMD claims Guinness World Record for 8.43GHz proce...
CIA Archives: Buddhism in Burma - History, Politic...
Wordle: Word Cloud Generator for Graphic Designer
Invitation for Demonstration outside Burmese Embas...
Sharing: ရတနာပုံ ဒိုင်းမွန်းပလာဇာ ဖွင့်တော့မည်
Night Photography: London Eye